China pepa bhaketi Kugadzira uye Fekitori | JAHOO
Imwe Wall Wall Kapu
Kaviri Wall Wall Kapu
Kraft bepa muto mukombe
Chigadzirwa magadzirirwo Item Saizi Dimension Chinyorwa Package Nyaya Saizi mu (cm) Popcorn & Fried Chicken Pepa Bhakiti 32oz 11.6 * 8.9 * 14.5 230g + 18pe 10pks * 50pcs 60 * 25 * 57 46oz 12.0 * 8.9 * 17.7 230g + 18pe 10pks * 50pcs 62 * 26 * 59 64oz （ipfupi & mafuta） 16.7 * 13 * 13.7 ...
Saizi Yakakura mu (cm)
Popcorn & Fried Chicken Pepa Bhaketi
64oz, ipfupi & yakakora
64oz, kureba & kuonda）
350 + isina kuroorwa PE
Fried huku bhokisi. Disposable bepa mugomo. Zvekutakura uye kushumira zvakakangwa huku uye zvimwe zvinopisa zvekudya zvinhu. Yakagadziriswa bepa rekurwisa kupinda kwegirizi uye kubuda.
Chingave chikafu chinochengetedza kana chikafu chitsva, paunenge uchida kutengesa kana kutakura chikafu kana kuti kana iwe uchida kupa yekuendesa pamba chikafu chechikafu saka mapepa ekurongedza anogona kuuya chaizvo.
Pepa rakagadzirwa kurongedza chikafu rakanyanya kukodzera kune yekudyira uye yevatengi zvigadzirwa mumusika.
Nematekinoroji edu achangoburwa, kurongedza mapepa kwave kuita kiyi yekuchengetedza nekutengesa zvigadzirwa zvekudya mumusika nekungogara uchimhanya. Chimwe chezvinhu zvikuru zvekuchengeta mundangariro uchitengesa chinhu chakaomesesa senge chikafu ndechekuona kuti mhando yacho inoramba isingazungunuke uye giredhi repepa rekurongedza mapepa rinobatsira.
Iko kune kwakawanda kudikanwa kwerudzi urwu rwekupakata muindasitiri yezvikafu.
Mazhinji emakambani makuru anoenderana neindasitiri yekupakira kuti ipe akakodzera mapakeji ezvigadzirwa zvavo
Basa rei rinoita Jahoo kurongedza kupa?
1.Samples inopa yemahara yedu mapepa mashanga zvigadzirwa.
2.Lead nguva inokurumidza, 10000 mativi emamita fekitori, makumi mashanu emuchina wekugadzira kuve nechokwadi chekuraira kwako kuraira nekukurumidza.
3.Tine nguva yakareba tichishandira pamwe nemakambani mazhinji ekutakura uye yedu yekutumira vhoriyamu yakakura. Iwo makambani anotumira anogona kutipa isu zvakanaka zvitepfenyuro.
4.Professional nyanzvi inotsigira. Tine yakanaka shure-okutengesa basa chikwata. Vanogona kugadzirisa matambudziko ako nekufamba kwenguva.
5.Zvinhu zvese zvichaongororwa uye kuyedzwa zvisati zvatumirwa.
Kugutsikana kwevatengi kunonyanya kukosha kwatiri.Kana iwe uine chero dambudziko kana mibvunzo zvine chekuita nekutengeserana.Ndokumbira kuti utibate naTrademanager kana Email.Ichapindurwa mukati memaawa makumi maviri nemana.
Pashure: bepa bhegi
Zvadaro: Paper Cup
Popular zvakakanyiwa namafuta huku bepa bhakiti kutsanya chikafu cu ...